Breaking News – democracy for burma
!! #ဟားခါးမြို့ ပေါက်ကွဲမူပုံရိပ်မျာ#HAKHA #EXPLOSION
On November 22, 2015 November 23, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMARLeaveacomment
update Hakha post
CHIN WORLD ဟားခါးမြို့ပေါက်ကွဲမူ လူ၇ဦးသေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့ သီတာလမ်းတွင် ယ္ခု လက်ရှိ ည ၁၁ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှု့တစ်ခုဖြစ်ပွား၍ သေဆုံးသူအရေအတွက် မခန့်မှန်းနိုင်သေး
Meithalatuah tuan mi inn asi rua. (Hmantlak ka zoh nak in keimah ka ruahnak)
ဟားခါးမြို့ ပေါက်ကွဲမူပုံရိပ်များ Photo Van Lyan
Hakha Dawrthar sang Pu Jonah innapuak: Minung5an thi; inn6a rawk; minung6hrawng an i hliam
Hakha khua, Dawthar sang Pu Jonah (Jonathan) inn November 22 zaan 10:30 ahapuak i an inn tang um mi chungkhar panga an thih dih pinahapawngkam inn5zongarawhchih dih.
Minung panga nak tlawm lo an i hliam. Amah pu Jonah Motor zong pa2aa rawkchih. An inn pawng inn pakhat cuacungdi caanphioakaang.
A thimi hna hi Pu Jonah inn tang um Lungzarh khuami Pu Neng Cin (Ceu Tling pa) le chungkhar an si tiah zumh an si. “Mah hna chungkhar hi amah Pu Neng Cin le an nu Pi Far Pen (Pu Jonah Iani), Biak Cer (Pu Neng Cinafanu), Ngakchia tang thum hrawng kai liomi (Biak Cer fanu), Sui Sui (Biak Cer nau nu) hna hi si dawh an si. Zeicatiah hi zan ah hin anmah chungkhar hi inn tang ah hin an um”, tiah innpa Lungzarh khuami pa nih Hakha Post ahachim.
Zeiruang ah dahapuah, aa rawh ti cu hngalh khawhasi rih lo. “Bombasi ko lai, zeidang cuasi lai tiah kan zum lo, zeicatiah mahtluk thazaang thawngn inapuak kho ding mi le inn hmanhachoih kho ding tiangapuak ding thil dang um dawhasi lo. Bomb hmanh ah pakhathnih lawngasi lai lo,abomb belte hi lamcawhnak I hman mi bomb phun maw zeidang ti tu cu kan thei kho rih lo,” tiah Hakha Palek pakhat nihahmuh ning Hakha Post ahachim.
A thi mi hna hi an uut I an muisam zong fiang in theih khawh an si lo. Cun an taksa hi pee 50 – 100 tiang aa thek,ahlawnh hna. A pawng inn panga lawng si lo inatlawmbik pee 500 tluk hrawng hla mi inn zeimaw thlalang awng zongahrawhchih mi an um.
Atu bantuk in Pu Jonah innapuah lio ahhin inn ngeitu Pu Jonah le an nu cu khual an tlawn karasi i an inn cung dot ahaum mi an pate Pu Than Er le an sin um nu nungak cu an nunnakahim i sii zung ah an kalpi hna.
Pu Jonah inn nihapuahchih mi innpa inn hna cu;
1. Pu Thang Tling (Khuafo)
2. Pu Heng Cin (Lungler)
3. Pi Thluai Pen (Kuhchah)
4. Pu Hniang Bik (Hakha)
5. Pu Cung Bik (Vomkua)
Mah hna inn5hiahrawhchih hna nain minung cu an him hna.
(The Hakha Post)
ဟားခါးမြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုများရှိကြောင်းသိရ
ဟားခါးမြို့ ဈေးသစ်ရပ် သီတာလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဟားခါးမြို့ ဒေသခံ သတင်းထောက်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါသည် ။
“ ဟားခါးမြို့မှာ မီးပျက်နေပြီးတော့ မီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ပေါက်ကွဲတဲ့ အသံကြီး အကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရတယ်။ ပထမတော့ လျှပ်စစ်ကြောင့် ပေါက်ကွဲတယ်လို့ ယူဆကြတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အသံကြားချင်း ချက်ချင်းရောက်သွားကြတယ် ။ ဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ကတော့ လုံးဝကို တစ်စစီ ပျက်စီးသွားတယ် ။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ မီးရှုးမီးပန်းတွေ လွှတ်သလို ထွက်လာတယ် ။ နောက်ပြီးတော့ မီးခိုးလုံးတွေ ထွက်လာတယ် ။ ဘေးနားက အိမ်လေး ငါးလုံးလောက်လည်း ပျက်စီးတယ်လို့ ပြောတယ် ။ ကျွန်တော့်မျက်မြင် လူသေအလောင်းတွေ တွေ့ရတယ် ။ ဘယ်လောက်သေတယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ပေမယ့် အနည်းဆုံး ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်လောက် သေမယ်လို့ ယူဆရတယ် ။ အဲဒီအိမ်မှာ မိသားစု ဘယ်နှစ်ယောက်နေတယ် ၊ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး ။ အိမ်က နှစ်ထပ်အိမ် ဖြစ်ပြီးတော့ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ နေတဲ့သူတွေတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုလည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဆိုတာ အခုထိ ဘာမှမေးမရသေးဘူး ။ ဖြစ်ပွားပြီး မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ရောက်လာတယ် ။ သူက ပြောတယ် ။ ယမ်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာ ပြောသွားတယ် ။ လောလောဆယ်တော့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ရောက်လာတယ် ။ မီးကလည်း ပျက်သွားတယ် ။ ” ဟု ဟားခါးမြို့ခံ သတင်းထောက်မှ ပြောကြားသည် ။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သက်၍ ဟားခါးမြို့ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဇေသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် “ကျွန်တော်နေတဲ့ အိမ်နဲ့ဆိုရင် တော်တော်လေး ဝေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပေါက်ကွဲမှုက ပြင်း ထန်တော့ အသံအကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရတယ် ။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တဲ့ နေရာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း အိမ်တွေတောင်မှ သူတို့ အိမ်ရဲ့ မှန်တွေကွဲတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ် ။ လူသေမယ် ။လူရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အပိုင်းအစတွေ တွေ့ရတယ် ။ ဘေးက အိမ်တွေကလည်း တော်တော် ပျက်စီးသွားတယ် ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။
(ဓာတ်ပုံ – ဆလိုင်းဗနေဇာဘွဲ့) ELEVEN MEDIA
!!! #UPDATE #သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှုမှ #လွတ်မြောက်လာသူ #၃၆ဦးကျောက်ဖြူသို့ ရောက်ရှိလာ
On March 14, 2015 March 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn Arakan, Burma, FERRY ACCIDENT, MYANMARLeaveacomment
Kyauk Phru Youth Net အောင်တံခွန် (၃) နစ်မြုပ်သောကြောင့် သေဆုံသူများ၏ အလောင်းများကို ဤသို့တွေ့ရသည်။ နောင်ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ မကြုံကြပါလေနဲ့တော်
UPDATEကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်ခဲ့ကြ သော ကျောက်ဖြူမြို့ ဓူဝံကြယ်နာရေးကူညီမှူ အသင်းသားများနှင့် ကျောက်ဖြူလူငယ် အင် အားစုများAung Kyaw Khaing ယနေ့ နံနက် ၁၁း ၂၀ ခန့်တွင် မလိခ အမြန်ယာဉ်ပေါ်၌ ဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကြီး ဦးဘိုဘိုဦး၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ ကောက်နုတ်ချက်။ —————————– မတ် ၁၄၊ နံနက် ၁၁ နာရီ ——————————- မတ် ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၄း၁၅ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ထွက်ခွာလာခဲ့သော အောင်တံခွန် ရေကြောင်းအမှတ် ၃ ၊ ခရီးသည် ၁၇၉ ဦးခန့်ပါရှိဟု သိရ။ ည ၁၀ နာခွဲတွင် မြေပုံမြို့နယ် – ငပသုံ၊ မြောက်ကြိမ်ကျွန်းအနီးတွင် နစ်မြုပ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းများအဖြစ် စစ်တွေမှ ရှင် ၇၃ ဦး၊ သေဆုံး ၂၃ ဦး။ မြေပုံ ရှင် ၆၀၊ သေဆုံး ၁၀ ဦး။ ကျောက်ဖြူ ရှင် ၁၇ ဦး၊ သေဆုံး ၈ ဦး။ ဘုန်းကြီး (သင်္ကန်းဝတ်) ၃ ပါးတွင် ၁ ပါး သေဆုံး၊ ၂ ပါး ပျောက်ဆုံးနေ။ စုစုပေါင်း သေဆုံး ၄၁ ဦး နှင့် ရှင် ၁၄၉ ဦး။ နံနက် ၁၀း၃၅ (မတ် ၁၄) မလိခ အမြန်ယာဉ်ပေါ်မှ ဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ဘိုဘိုဦး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ – ထပ်မံ သေဆုံး ကျား ၁ ဦး၊ မ ၁ ဦး နှင့် အသက်ရှင် ကျား ၁ ဦး၊ မ ၁ ဦး။ သင်္ဘောဝန်ထမ်း ၁၄ နှင့် ရေယာဉ်မှူး ၁ = ၁၄ + ၁ နှင့် ရဲဝန်ထမ်း ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၀န်ထမ်း ၁၈ ဦး ပါရှိကြောင်း သိရ။ တိုးပေါင်းစာရင်းအရ – အသက်ရှင် ၁၆၉ ဦးနှင့် သေဆုံး ၄၃ ဦး ဟု ( နံနက် ၁၀း၂၀ – မတ် ၁၄ – မလိခ အမြန်ယာဉ်ပေါ် – ရဲမှူး ဘိုဘိုဦး ပြောကြားချက်အရ) တိုင်းရင်းဝန်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင် ဦးဆောင်သော ပထမအသုတ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ယနေ့ (မတ် ၁၄ – နံနက် ၆း၀၀ နာရီ – ရွှေပြည်တန်နှင့် ထွက်ခွာ။ ကျောက်ဖြူခရိုင်မှူး ကျော်ထွဋ်၊ မြေပုံ ခရိုင်မှူး ဦးတင်ရွှေ၊ မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူး တို့နှင့် မီးသတ်ဌာန၀န်ထမ်းများပါရှိပြီး မြောက်ပြင် ပိုက်ဆိပ်တွင် မြေပုံနှင့် စစ်တွေမြို့နယ်မှ ရေတပ်မှ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေ။ စစ်တွေမြို့နယ်မှ အသက်ရှင် ၇၁ ဦးကို ရွှေပြည်တန်နှင့် ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေ။ သေသူများကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးသွားမည်။ မြေပုံမြို့နယ်မှ အသက်ရှင်သူ ၆၀ ဦးကို မြေပုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ဖြစ်။ သေသူများ အားလုံးကို ကျောက်ဖြူ ရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ဆောင်ပြီးနောက်မှသာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များသို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်သွားမည်။ သင်္ဘော စတင်ထွက်ခွာစဉ်က ခရီးသည် ၁၇၉ ဦးခန့် ပါရှိသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း။ ၁၉၂ ဦးဟု ထပ်မံ သိရှိရ။ ကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် မည်မျှ ပါရှိသည်ကို အတည်မပြုနိုင်သေး။ Over weight ကြောင့် သင်္ဘော နစ်မြုပ်သည်ဟု သုံးသပ်ထင်မြင်ချက်ပေး။ သင်္ဘောမှာ တရုပ်နိုင်ငံလုပ်ဖြစ်ပြီး – သက်တမ်းမှာ နှစ် ၂၀ ကျော်ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရ။ သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှုမှ လွတ်မြောက်လာသူ ၃၆ဦးကျောက်ဖြူသို့ ရောက်ရှိလာ Rakhine News Agency (ကျောက်ဖြူ၊ မတ် ၁၄) ယမန်နေ့ညပိုင်းက မြေပုံမြို့နယ်အနီး သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အသက်မသေဘဲ လွတ်မြောက်လာသူ များအနက် ၃၆ဦး သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီကျော်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့သို့ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “NAVY ကလာပို့လို့ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၃၆ဦး ရောက်နေပါပြီ။ လောလောဆယ်တော့ ကျောက်ဖြူ အလက ၄မှာထားတယ်” ဟု ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဦးထွန်းလွင် က Rakhine News Agency သို့ပြောသည်။ တောင်ကုတ်မြို့မှ ခရီးစတင်ထွက်ခွာလာသော အောင်တံခွန် – ၃ သင်္ဘောသည် မတ်လ ၁၃ရက် ညနေပိုင်းက ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ခရီးတစ်ထောက်နားပြီး စစ်တွေမြို့သို့ထွက်ခွာချိန် မြေပုံမြို့နယ်အနီး မျောက်ကြိမ်ကျွန်း အနီး နစ်မြုပ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အောင်တံခွန် – ၃ နှစ်ထပ်သင်္ဘောသည် ကျောက်ဖြူမြို့မှ လူဦးရေ ၃၀၀ခန့် နှင့် ကုန်စည်များကို တင်ဆောင်၍ ထွက်ခွာလာပြီး ည ၈နာရီနှင့် ၉နာရီကြားတွင် သင်္ဘောဦးပိုင်း ပေါက်၍ ရေ၀င်နစ်မြုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အနီးဆုံးကမ်းသို့ ကူးခတ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် အသက်ရှင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လွတ်မြောက်လာသူ အချို့ကပြောသည်။ “ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက တစ်မိသားစုလုံး ကျောက်ဖြူမှာ ကျောက်ထုတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ အခု ဇာတိဖြစ်တဲ့ ရသေ့တောင်ဘက်ကို ကလေးတွေရှင်ပြုဖို့ သွားတာ။ စုစုပေါင်း မိသားစု ၈ယောက်မှာ ၇ယောက်ဘဲ ပြန်ပါလာတယ်။ ကျန်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ သေသလား၊ ရှင်သလား အခုအချိန်ထိ မသိသေးဘူး” ဟု သင်္ဘောနစ်မြုပ်ရာမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ ဦးပြည်စိုး က Rakhine News Agency သို့ပြောသည်။ အောင်တံခွန် – ၃ သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှုကြောင့် သံဃာတော် ၁ပါးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး၊ ကျန် ၂ပါးမှာ အသက်ရှင်ခဲ့ကာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ ၁၄၈ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၄၁ ဦး ရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ကျန်ရှိသည့် ပျောက်ဆုံးနေသူများကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ RNA သတင်းအဖွဲ့ သင်္ဘောနစ်မြုပ်ရာမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများကို ကျောက်ဖြူမြို့တွင် တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ – ကျော်ထွန်း / RNA) RakhineNewsAgency အောင် တံခွန် ၃ နစ်မြှပ် ရာမှ ဆယ် ယူရှိ ပြီး ကျောက်ဖြူ သို ပထမ ဆုံး သယ်ယူလာ သော ကျောက်ဖြူမြို့ မြစ်နားတန်းရပ်ကွက်မှ ၉ တန်း ကျောင်းသူ မခင် ချစ်စုမွန် photocredit Aung Kyaw Khaing အောင် တံခွန် ၃ နစ်မြုပ် ရာမှ သံဃာ တော် တပါး အပါအဝင် သေဆုံးသူ ၃၅ ယောက် ၏ ရုပ်ကြွင်းကို ဆယ်ယူရရှိ ထားပြီဖြစ် ကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးသွား ရောက် နေ သော ကျောက်ဖြူမြို့ ဓူဝံကြယ်နာရေးကူညီမှူ် အသင်းမှသိရသည်။ ကျန် ရှိနေ သေးသော ရုပ်ကလပ်များအား ဆက်လက် ရှာ ဖွေ နေဆဲဖြစ် ကြောင်း #####အသက် မ သေဘဲရှင် သန်လွတ် မြောက်လာသူအချို့ အသက် မ သေဘဲရှင် သန်လွတ် မြောက်လာသူအချို့အာင် တံခွန်၃ နစ်မြှပ် ရာတွင် အသက် မ သေဘဲ လွတ် မြောက်လာသူများအား စစ်ရေယာဉ် 553 မှ ကျောက်ဖြူမြို့ သို သယ်ယူပို့ ဆောင်ပေးစဉ် ဓူဝံကြယ်နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ…အောင်တံခွန်(၃)နစ်မြုပ်နေရာသို့ လိုအပ်သည့်ကူညီမှုများပေးရန်ထွက်ခွါ…. ၁၄.၃.၂၀၁၅… ၉း၄၅ … Thaung Tin အာင်တံခွန် ၃ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး နှစ်ထပ် သင်္ဘော ကျောက်ဖြူ အထွက် နောင်တော်ကြီး နောင်တော်ငယ် မြစ် တွင်ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်ပြီး နစ်မြုပ် မှု ဖြစ်ပွား =============================== မတ်လ၁၃ရက်နေ့ ည ၈နာရီ ခန့်က ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်းမှ စစ်တွေမြို့ကို ထွက်ခွာလာသည့် အောင်တံခွန် ၃ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး နှစ်ထပ် သင်္ဘောသည် နောင်တော်ကြီး နောင်တော်ငယ်မြစ် ကို ဖြတ်သန်းရာ တွင် ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိပြီး နစ်မြှပ်သွားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ယခု နောက်ဆုံးရရှိထားသည့် သတင်းများအရ မြေပုံမြို့မှ စက်လှေအချို့ လည်း ကူညီကယ်ဆယ်ရန် လိုက်ပါသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကို ဆောင် ရွက်ရန် ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့ မှ စစ်တွေမြို့ သို့ ထွက်ခွါလာသည့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း အောင်တံခွန်သင်္ဘော ၃ သည် ၂၀၁၅ ခုမတ်လ ၁၃ ရက်နိန့်ညဇာဖက် ၈း၃၀ အချိန်လောက်မာ နစ်မြုပ်လားကြောင်း ။ သင်္ဘောနစ်မြုပ်ချိန်မာပါဝင်လားရေ အသက်ဆုံးရှုံးသူတိအတွက် မိသားစုနန့်ထပ်တူ ကြွီကွဲဝမ်းနည်းကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ စစ်တွေမြို့နယ်က သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာ
On March 9, 2015 March 9, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, NLD, student protest, SUUKYILeaveacomment
NLD မနက်ဖန် ၁၀ နာရီ တနိုင်ငံလုံးက ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ဆန္ဒပြကြရန် အချက်ပေးပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များအားလုံးအနေနဲ့ မနက်ဖန် ၁၀ ရက်နေ့ ၃ လပိုင်းတွင် ကျောင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချရန် အချက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
10/3/ Students want blockages removed by Mar 10 @ 10am, warning that ‘consequence will be responsible of the govt.’
Daw Aung Sann Suu ‘ house show poster is not to student and NLD member . It is for Government .
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ကိုအောင်ဆန်းပုံ ရုတ်တရတ် ပြောင်းလဲချိတ်ဆွဲ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် (၅၄) အရှေ့တွင် ယခင်က နိုင်ငံရေးသမား သခင်အောင်ဆန်းပုံကို ချိတ်ဆွဲထားရမှ မတ်လ ၉ ရက်မှစတင်၍ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုအောင်ဆန်းပုံကို ပြောင်းလဲချိတ်ဆွဲထား သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ယင်းသို့ပြောင်းလဲချိတ်ဆွဲမှုသည် လက်ပံတန်းတွင် တားဆီးခံထားရသည့် ဆန္ဒပြကျောင်းသားများက အစိုးရကို ၁၀ ရက် ၁၀ နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး အတားအဆီးများ ဖယ်ရှားရန် ရာဇသံပေးထားချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေသည်။
NLDပါတီဝင်မဟုတ်သည့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ကျောင်းသားသပိတ်ကို တရားဝင်ထောက်ခံပြောဆိုရန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးများနှင့် မျက်နှာနာစရာဖြစ်နေသဖြင့် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ထောက်ခံပြောဆိုသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေစဉ်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုငိ်ိခြင်းမပြုရန် နေအိမ်ရှေ့တွင် Continue reading “#breakingnews #NLD #မနက်ဖန် #၁၀ နာရီ #တနိုင်ငံလုံးက ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး #ဆန္ဒပြကြရန် အချက်ပေးပြီ။” →
#now #15/11/ #Myanmar #Burma Student Protesters at Hledan , near the university
On November 15, 2014 November 15, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Students Boycott Education Law -photcr. Khant Minn Htet
ဒို့အရေး သံတွေ ညံနေတဲ့ လှည်းတန်း
ကျောင်းသားထု သပိတ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံကို အလေးပြုပြီး လှည်းတန်း တံတားအောက် ကို ပြန်လည် ထွက်ခွါစဉ် နှင့် လှည်းတန်း တံတားအောက် စုဝေး ရောက်ရှိနေစဉ် ဆက်လက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ဆန္ဒဖော်ထုတ် သွားမည်ဟု သိရပါသည် ။
၁၅ – ၁၁ – ၂၀၁၄ . ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်